NYI LYNN SECK 18+ DEN: ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်
Posted by NLS at 1/27/2010 11:48:00 PM
6 Responses to “ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်”
ခေတ်မီ - စကတ် တိုလေးတွေ ၀တ်ခြင်း
ဖွံ့ဖြိုး - အမှိုက်တွေ အရင်ကထက် ပိုမို
တိုးတက် - လိုင်းကားများပေါ် တိုးတက်ရခြင်း......
ခင်ဗျား အတော်နောက်တာပဲဗျ။ မဆိုးပါဘူး။ အတော်တော့ အလုပ်ရသွားတယ်။ ခေါင်းကိုအလုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ ဟဲဟဲ။
အော်... ဒါနဲ့... goggle ဆိုတာက တမင်ရေးထားတာလားဗျ။
goggle = large spectacles equipped with special lenses, protective rims, etc., to prevent injury to the eyes from strong wind, flying objects, blinding light, etc.
Thankalot. I really didn't know that word. Thank you.
ခါတိုင်း imageshack မှာ တင်တာပါ။ blogspot ဆိုတော့ ပုံတွေ မမြင်ရဘူးဗျ။ FB မှာ ကြည့်ရလို့ တော်သေးတယ်။